Ampefiloha : voatafika ny toerana fakana vola amin’ny finday | NewsMada
Ampefiloha : voatafika ny toerana fakana vola amin’ny finday
Par Taratra sur 02/09/2017
Misesy ny fanafihana eto an-dRenivohitra. Notafihan’ny jiolahy ny toerana fakana vola amin’ny finday na antsoina koa hoe kioska ny alakamisy hariva teo tokony ho tamin’ny 5 ora, teny Ampefiloha. Araka ny fanazavana azo, roa lahy nitondra moto ireo nanafika ireo. Nitondra basy izy ireo ary niditra tamin’ity toerana ity. Noterena hamoaka vola ireo mpiasa tao ka lasa tamin’izany ny vola rehetra. Tsy nisy sahy nanohitra noho ny tahotra ny basy. Tao anatin’ny fotoana fohy monja ny nanatanterahan’ireo jiolahy ny asa ratsiny. Nitsoaka tamin’ny moto ka tsy nisy ny sakantsakana izy ireo. Efa lasa elaela ireo vao tonga ny polisy.
Mampiseho hatrany ity tranga ity fa mahazo vahana eto an-dRenivohitra ny fanafihana na efa misy ihany aza ny mpitandro filaminana manao fisafoana etsy sy eroa. Toy ny efa fantatry ny jiolahy ny toerana misy ireo polisy ka tsy taitra intsony ireo manafika.
Mihorohoro ny mponina eto Antananarivo. Teny Tsiadana, Andravoahangy, Andraisoro sns, izao indray, teny Ampefiloha. Efa manakaiky ny mitranga any ivelany mihitsy ny zava-miseho eto amintsika. Miparitaka ny basy, mamono olona ny jiolahy, manoatra noho ireny anaty horonantsarimihetsika ireny. Maromaro ihany ny polisy mivezivezy amin’ny 4×4 manerana ny tanàna, saingy tsy mahasakana ny jiolahy hanao ny asa ratsiny izany. Miandry vokatra ny rehetra…